Suzuki Solio 2011 (#684336) for sale in Bago | CarsDB
Lot Number: #684336
SUZUKI SOLIO , Style လဲကျ၊ Smart လဲ ကျ Function များတဲ့ Alphard ​ပေါက်​စ​ ကား​ကောင်း​ကားသစ်​လေး နဲ့ မိသားစု၊ ကလေးကျောင်းကြိုကျောင်းပို့ ,မြို့ တွင်း မြို့ ပြင် ခရီးထွက်​မလား၊ ပါကင်ထိုးရလဲလွယ်ကူပြီး၊
ငြိမ့်​​ညှောင်းတဲ့ကား ​ကောင်း​လေး ​ရောင်းရန်​ရှိပါတယ်​။
4Q/9 ​ထောင်​​ကျော်​, mdy လိုင်​စင်​ , နံပါတ်​ပြား QR code ပါ။
Driver Original လက်တင်
Driver seat အပူ​ပေးစနစ်​လဲပါ။
TV ,DVD, SD card, USB port , Bluetooth & Back camera
Auto Gear, Engine Power 1242 CC
ဆီစားသက်သာစေသော Auto ECO Mode
Push Start, Smart key
SRS Airbag4units
Back Wiper / Original5Tinted Privacy Glasses
2 slide doors,1 power slide door (Left) Remote ဖြင့်​ အဖွင့်​/ပိတ်​ လုပ်​နိူင်​, Rear wiper ကလဲပါ။
Smart Key, Push startလဲဖြစ်​ Remove ဖြင့် အဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်။
​နောက်​ခန်းထိုင်​ခုံ က ​ရှေ့တိုး
အရပ်​ရှည်​တဲ့​ခြေဆန့်​ချင်​သူအတွက်​ သက်​​တောင့်​သက်​သာကျယ်​ကျယ်​ဝန်းဝန်းဖြင့်​ ခရီးသွား နိူင်​​တော့
ကျယ်ဝန်းလှသော ကားနောက်ခန်း. ခရီးဝေးသွားရင်လည်း auto Eco System ပါလို့ ဆီစားသက်သာတယ်၊ Safety First (လုံခြုံရေး) အတွက် SRS Airbag4လုံး ၊ သက်တောင့်သက်သာမောင်းဖို့ရာ Driver လက်တင် ၊ အရေးကြီးစာရွက်ပစ္စည်းထားဖို့ အံဝှက် Safe Box ၊ အအေးဓာတ်နဲ့ထားဖို့လိုတဲ့ ပစ္စည်းတွေအတွက် Mini Cool box ရယ် ကားအတွင်းအပြင် အပူချိန်ပြပေးတဲ့ Digital Aircon တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ထည့်ပေးထားတော့ အားလပ်ရက်မှာ မိသားစုခရီးထွက်ဖို့ အသင့်​ရှိတဲ့ ကား​လေးပါ။
©© Skirt ပါတ်​လည်​, Spoiler /Original Solio Floor mats(​အော်​ ​ခြေနင်းပြားများ) /​အော်​ ရေကာ / လေထိုးစက်/ ဂျိုက် /Wheel Spanner
​ရှေ့တာယာ ၂လုံး အသစ်​လဲထား။
​နောက်​တာယာ ၂လုံး 75%။
ကားမှန်ကန်ဖို့ - လိုင်စင်မှန်ကန်ဖို့ - ကားကောငိးဖို့ အာမခံပါသည်
လိုင်စင် သက်​တမ်းက ၂၀၂၁,
ရောင်းမည့်ဈေး - သိန်း 198 ပါးပါးဘဲ​လျော့
ပဲခူး မြို့ တွင်းကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။.... / Good Condition .***CarsDB တွင်ကြော်ငြာတင်ထားသောကားဟုပြောကာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်***
In order to avoid being mistaken for scammers, please mention to Tun Tun Min that you are enquiring about Suzuki Solio 2011 posted on CarsDB when you are calling.
Last Edited about2months